Xildhibaan Jeesow” Amisom meel aan kala xisaabtano ma naqaan | Baydhabo Online
Xildhibaan Jeesow” Amisom meel aan kala xisaabtano ma naqaan
Guddiga Arimaha Gudaha iyo amniga Baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay inaysan garaneyn meel ay kala xisaabtamaan ciidamada Amisom ee jooga Somaliya oo dhibaatooyin kala duwan u geysta shacabka Somaliyed.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Arimaha Gudaha iyo amniga Baarlamaanka ayaa wuxuu sheegay inay og yihiin dhibaatooyinka ciidamada Amisom ay u geysanayaan dadka shacabka ah.
Wuxuu sheegay iyadoo ay jirto dhibaatoyinka noocaasi ah oo Amisom ay u geysanayso dadka shacabka ah, hadana aysan aqoon meel ay kala xisaabtamaan Amisom.
Daahir Amiin Jeesow ayaa tilmaamay Saraakiisha ciidamada Amisom inaan lahelayn oo ay adag tahay sida loola kulmo, taasina ay keenayso inaysan jirin meel loo maro oo lagala xisaabtamo.
Shalay ayeey aheyd markii gaari ay wateen ciidamada Amisom qof shacab ah uu ku jiiray Isgoyska KM4 kadibna uu isku dayay inuu gaarigaasi cararo, balse Dad shacab ah ay is hor istaag ku sameeyeen.
Ka sokoow dhacdadii shalay Amisom waxa ay si bareer ah dhibaatooyin ugu geysataa dadka shacabka ah, iyadoo Bishan aan ku jirno 4 ruux oo shacab ah Amisom ay ku dileen deegaanka Buulo mareer duleedkeeda.
Saraakiisha Amisom ayaa marka ay geystaan falalka tacadiga Bulshada waxa ay soo saaraan Qoraal Saxaafadeed ay raali gelin kaliya uga bixinayaan wixii dhacay.